Traamp qorannoo yakkaa isarratti jalqabame ilaalchisee qondaaltonni ragaa akka hin baane dhoorkuuf aangoo kan hin qabaanne tahuu ibsame - NuuralHudaa
Kongrasiin Ameerikaa Prezdaant Traamp aangoo isaa seeraan ala fayyadamee jira jechuun, qorannoo yakkaa jalqabuun ni yaadatama. Kanuma hordofuun Prezdaantichi qorannoon narratti baname seeraan alaa fi aangoo irraa na fonqolchuuf shira warri paartii dimokraatotaa narratti banan jechuun falmata jira. Haaluma kanaa Wajjirri Prezdaantichaa ragaalee namaa fi sanadii qorannoodhaaf barbaachisan kan hin kennine tahuu beeksise.
Kanuma hordofuun Kongirasiin Ameerikaa dhimmicha gara mana murtiitti geeysee ture. Haaluma kanaan Abbaan murtii Federaalaa Ameerikaa dhimmicha ilaalaa ture, qondaaltota ragaaf barbaadaman keessaa Waayit Haawusitti gorsaa seeraa kan ture Donald Mc Ghan waamicha dhiyaateef kabajuun, Prezdaant Traamp aangoo irraa kaasuuf koree qorataa jiru duratti dhihaatee ragaa ba’uu akka qabu murteessee jira.
Abbaan murtii Ketaanji Jaaksan akka jedhetti, “qondaaltota amma hujii irra jiranis ta’ee warra ammaan dura aangoo irra turan, Koree qorattoota yakkaa duratti dhiyaatanii raga akka hin baane dhoorkuuf Prezdaant Traamp angoo tokkollee hin qabu” jedhe. Murtii kana hordofuun abukaatonni Mc Gahn akka jedhanitti, maamilli isaanii waamicha kongirasii fudhatee koree qorattoota yakkaa duratti ni dhiyaata.
Bulchiinsii Traamp gama isaatiin murtii abbaa seeraa kana irratti ol-iyyannaa dhiyeeffachuuf tahuu ibse.
Qondaaltota dhiyaatanii raga ba’u didan keessaa ministeera haajaa alaa Amerikaa Mike Pompeyoo, gorsaa dhimma nageenyaa duraanii John Bolton fi itti aanaan hogganaa bulchiinsa Waayit Haawus keessatti argaman.
July 30, 2021 sa;aa 4:37 pm Update tahe